महाकाली अञ्चल अस्पतालको शवगृहमा उपकरण अभाव, काम गर्न समस्या - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 10:03
महाकाली अञ्चल अस्पतालको शवगृहमा उपकरण अभाव, काम गर्न समस्या
इनेप्लिज २०७१ चैत १० गते ८:४० मा प्रकाशित
बेलौरी (कञ्चनपुर), १० चैत । महाकाली अञ्चल अस्पतालको शवगृहमा उपकरण अभाव हुँदा परीक्षण गर्न समस्या भएको छ ।
शवगृहमा शव चिरफारका लागि चाहिने उपकरण अभाव भएका कारण परीक्षण गर्न समस्या भएको अञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् ।
शवगृहमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले अस्पताल प्रशासनसँग उपकरण र शवगृहमा भएका समस्याबारे जानकारी गराए पनि अझैसम्म उपकरण र पानीको उचित व्यवस्था नभएको गुनासो गरेका छन् ।
अञ्चल अस्पतालका जनरल फिजिसियन डा रामबिहारी चौधरीले शव राख्ने आइस बक्स नभएका कारण समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शवगृहमा पानीको समेत समस्या छ । “पानी नहुँदा काम गर्नसमेत समस्या हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । चौधरीले शवगृह आधुनिक नहुँदा समस्या भएको बताउँदै शवगृहमा आइस बक्सको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नाइफोल्डर, निडिल होल्ड, सिजर, टाउको खोल्ने मेसिन, आइस बक्स र पानीको व्यवस्थापन नहुँदा परीक्षण गर्न समस्या भएको हो । “शवगृहमा कामचलाउ उपकरण र थिचोमिचोमा परीक्षण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । “सबैभन्दा मुख्य पानीको समस्या छ ।” शव परीक्षण गर्न धेरै पानी चाहिने भए पनि शवगृहमा पानीको समेत व्यवस्था नहुँदा झन समस्या भएको छ ।
बेवारिसे शव आएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी चिकित्सकहरुलाई झन समस्या हुने गरेको छ । अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुरेन्द्र लाल श्रेष्ठले पनि शवगृहमा पानीको समस्या भएको स्वीकार्दै, शवगृहमा काम गर्ने चिकित्सकहरुले उपकरण अभाव बारे कुनै जानकारी नगराएको बताउनुभयो । शव गृहको सुधारका लागि प्रयास थालिने डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो । शवगृहमा दुई तिन लास मात्रै राख्न सकिने व्यवस्था भएपनि कहिलेकाँही बढि लासहरु आउने भएकाले घरको क्षेत्रफल समेत बढाउनुपर्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
अञ्चल अस्पताल स्रोतका अनुसार शवगृहमा भएको समस्या बारे बाहिर सार्वजनिक नगर्न समेत अस्पताल प्रशासनले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । काम चलाउ अवस्थामा शव पोष्टमार्टम हुँदै गरेको अञ्चल अस्पताल कर्मचारी स्रोतको दावी छ ।
अठार जना चिकित्सकको दरबन्दी भएपनि दरबन्दीअनुसार पदपूर्तीको समस्या खेप्दै आएको अञ्चल अस्पतालको शवगृहमा समेत उपकरण, पानी लगायतका समस्या समेत समाधान नहुँदा सर्वसाधारण चिन्तित भएका छन् । अञ्चल अस्पताल जस्तो अति सम्वेदनशिल क्षेत्रमा उपकरण र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानिय बासिन्दाको सुझाव छ ।